China Isantya esiphezulu sokuxuba isilinda yoMvelisi kunye noMthengisi | Qiangzhong
Isilinda sokuxuba ngesantya esiphezulu
Izixhobo zisebenzisa isantya sokuxuba esisezantsi esinezixhobo zokuphembelela kwaye zinokunyibilikisa itofi, izongezo zepowder, njl njl, kwaye okwangoku yeyona modeli inemveliso kakhulu yetanki yokuxuba ngesantya esiphezulu. Izixhobo zibonakaliswa lixesha elifutshane lokuxuba kunye ne-homogenization, ngaphandle kokuchaphazela ukusebenza kwemathiriyeli, ukuqinisekisa ukunambitheka koqobo, ukusebenza okulula, ubungakanani obuncinci kunye nofakelo olulula. Esi sisixhobo esibaluleke kakhulu kwimizi yobisi, isiselo kunye namayeza amayeza.
Emazantsi etanki, ijikeleza ngesantya esiphezulu kwaye ivelisa uxinzelelo oluphezulu lokuhamba kwe-centrifugal ngenqanaba lokuhamba okukhulu. Emva koko izinto zidlula kwisithuba esincinci phakathi kwe-stator kunye ne-rotor ngamandla okucheba, okuhamba neminye imikhosi yefuthe, i-extrusion kunye nokusila. Kwangelo xesha, ukuhamba koxinzelelo oluphezulu lwe-centrifugal kwenza ukuba izinto zijikeleze kumjelo we-vortex. Emva kokujikeleza malunga nemizuzu eli-10, izixhobo ziyapheliswa ngokukhawuleza, zichithakele, zityumke, umhlaba, uxutywe, u-homogenized kunye ne-emulsified ukwenza isulryry entle.
HYG series-ngesantya esiphezulu itanki yokuxuba ine yokusebenza ukuxubana ngcono kakhulu xa kuthelekiswa nezixhobo zemveli ukuxuba. Izixhobo zokuxuba zemveli zithatha ixesha elide ukucubungula kunye nokudibanisa izinto ezinobunzima obuphezulu kunye nezinto zamasuntswana alukhuni. Kodwa kuya kuba lula ngakumbi ukuzicwangcisa nge-JBG-uhlobo lwesantya esiphezulu sokuxuba itanki endaweni yoko. Kwi-JBG yohlobo lwe-high speed yokuxuba itanki, zonke izinto eziphambili zenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu engenazingcingo kubandakanya umzimba wetanki, i-rotor, i-stator, izixhobo zombhobho, iivelufa, njl njl. Itywina loomatshini likwimo enkulu yembuyekezo, elenza ukuba itanki linxibe into enganyangekiyo, yomelele kwaye ichaphazele umonakalo. Kwi-JBG / X yesantya esiphezulu itanki yokuxuba, indawo evaliweyo inokuvulwa ukulungiselela ukugezwa kwezikhewu zezixhobo, ezilungele ukuqhubekeka kwezinto eziphilayo, izinto ezonakalayo kunye nokudibanisa izinto ezilula ukuzomisa.
Egqithileyo Uhlobo lokuphakamisa ngesandla lokuxhuba okuphezulu
Okulandelayo: Amanzi kunye nomgubo wokuxuba kunye neqonga
Ngaphantsi kwe-shear ephezulu yokuxuba umphanda
I-shear ephezulu yokuxuba umphanda
Isilinda sokuxuba esiphakamileyo esisezantsi
Iselfowuni esinyithiweyo isakhelo sokuphakamisa i-hydraulic
Umatshini wokusasaza ohleliweyo
Ukuphakamisa kombane i-shears emulsifier ephezulu
Isantya esiphezulu seTanki yokuBamba